बालबालिका नियमित खोप छुटाउनु भएको त छैन! यी ९ खोपले यस्ता रोगबाट बचाउँछ? – Health Post Nepal
बालबालिका नियमित खोप छुटाउनु भएको त छैन! यी ९ खोपले यस्ता रोगबाट बचाउँछ?
२०७८ भदौ १५ गते १८:०७
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १५ महिना मुनिका बालबालिकालाई विभिन्न रोग विरुद्दका नियमित खोप लगाउनका लागि सबैलाई अनुरोध गरेको छ।
महामारीका कारण धेरै जनाले आफ्ना बालबालिकालाई दिनुपर्ने नियमित खोप छुटाएको भन्दै अविभावकलाई निरन्तर खोप लगाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो।
नियमित खोप नलगाउँदा दीर्घकालिन रुपमा विभिन्न संक्रामक रोगको संक्रमण, मृत्युदर र अपांग हुने दर जस्ता समस्या देखिन्छन्।
कुन खोपले कुन रोगबाट बचाउँछ?
जन्मने बितिकै शिशुलाई बिसिजी.१ खोप दिइन्छ। जसले क्षयरोगबाट बचाउन मद्दत गर्छ।
त्यसैगरी, ६ हप्ताभित्रमा डिपिटी, हेप बी–हिब, पोलियो, एफ. आइ.पि.भी, पि.सि.भी र रोटा (पहिलो मात्रा) दिइन्छ। जसले भ्यागुत रोग, लहरे खोकी, धनुष्टंकार, हेपाटाइसिस–बी र हेमाफिलस इन्फ्लुइन्जा–बी, पोलियो, निमोनिया र झाडापखला विरुद्ध लड्ने काम गर्छ।
त्यसैगरी, १० हप्ताभित्रमा डिपिटी, हेप बी–हिब, पोलियो, पिसिभी र रोटा( दोस्रो मात्रा) दिइने गरिन्छ। जसले भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टंकार, हेपाटाइसि–बी र हेमोफिलस इन्फ्लुइन्जा–बी, पोलियो , निमोनिया तथा झाडापखलासँग लड्ने काम गर्छ।
१४ हप्तासम्ममा पोलियो, एफआइपिभी, डिपिटी र हेपबी हिबको तेस्रो मात्रा दिनुपर्ने हुन्छ। जसले पोलियो, भ्यागुते रोग, लहरे खोकी , धनुष्टंकार, हेपाटाइटिस–बी र हेमोफिलस इन्फुलुइन्जा बी जस्ता रोगबाट बचाउने गर्दछ।
९ महिनाभित्रमा पिभिभीको तेस्रो मात्रा दिनुपर्छ। त्यसैगरी, दादुरा –रुबेला (पहिलो मात्रा दिनुपर्छ। यी खोपहरूले निमोनिया, दादुरा र रुबेला विरुद्द लड्ने गर्छन।
त्यस्तै, १२ महिनाभित्र जापानिज इन्सेफलाइटिस खोप दिनुपर्छ। १५ महिनामा पुन दादुरा–रूबेलाको खोप दिनुपदर्छ।